Izindaba - Umshini wokugcwalisa umshini wensimbi we-hydraulic hydraulic scrap
Ngenxa yemithombo yamaminerali elinganiselwe futhi engavuseleleki, ngokuthuthuka okuqhubekayo kwabantu, lezi zinsiza ziyancipha njalo, ukushoda kwezinsiza nakanjani kube isimo abantu okudingeka babhekane naso ngokuqondile. Umkhuba wokushintsha okudala nokusha ekusetshenzisweni kwemikhiqizo yensimbi akunakugwenywa. Ngenxa yokugqwala, ukulimala kanye nokuqedwa kwemvelo kwemikhiqizo yensimbi, inani elikhulu lezinsimbi ezilahliwe likhiqizwa minyaka yonke. Uma lezi zinsimbi zilahlwa ngokuthanda kwakho, kokubili ukungcoliswa kwemvelo kanye nokumoshakala kwemithombo yensimbi enomkhawulo kuyobangelwa. Idlala indima ebaluleke kakhulu ekubuyiseleni insimbi, ukuncibilikisa ukuncibilika kabusha, ukuthuthwa kwezinsimbi ezilahliwe kanye nokudiliza izimboni.
Umshini wokucindezela we-Hydraulicingeyazo zonke izinhlobo zezinto zensimbi ezicindezela uhlelo lokusebenza lomsebenzi wokupakisha. Izinto ezisetshenziswayo zifakwa ebhokisini lezinto ezibonakalayo, futhi isilinda se-hydraulic sisebenza ngaphansi kwengcindezi yokucindezela nokwenza izinto zibe amaphakheji ensimbi ahlukahlukene. Qalisa i-hydraulic packer ngaphandle komthwalo, qala iphampu yamafutha enjini, umgogodla we-valve we-valve ehlehlayo utholakala phakathi, futhi ukuphuma kukawoyela kwephampu kawoyela kubuyela kusilinda kawoyela nge-electro-hydraulic reversing valve ngaphansi kwengcindezi elawulwa i-valve yokusiza. Okwesibili isenzo sokupakisha se-hydraulic, lapho ipompo likawoyela lisebenza, ukuphuma kwepompo kawoyela kungena nge-valve elawulayo ngaphansi kwengcindezi yokulungisa nge-valve ehlehlayo, induku yepiston yehla kancane ngemva kwesikhala esikhulu se-cylinder, kanye namafutha phambi isilinda. I-tank yamafutha itholwa ethangini lamafutha ngokusebenzisa i-valve yokuhlehlisa, futhi umshini wokupakisha uqaphela umsebenzi wokugcwalisa; I-metal hydraulic packer isethwe kabusha, iphampu kawoyela iyasebenza, ukuphuma kwepompo kawoyela kudluliselwa egumbini elingaphambili le-cylinder enkulu ngaphansi kwengcindezi elawulwayo, uwoyela ubuyela ethangini kanye nekesi lokupakisha ngemuva kwesilinda, futhi uwoyela uyabuya. .
Isicelo: I-Y81 uchungechunge lwebhali yensimbi ingakhama zonke izinhlobo zemfucumfucu yensimbi (izicucu, ukushefa, izinsimbi ezilahliwe, i-aluminiyamu elahliwe, ithusi elilahliwe, insimbi engagqwali elahliwe, izimoto ezilahliwe, njll.) ibe yi-cuboid, i-octagonal shape, isilinda nokunye ukushaja okufanelekile kwalowo mumo, okunganciphisa ezokuthutha. kanye nezindleko zokuncibilikisa futhi kuthuthukiswe isivinini sokusakazwa kwesithando somlilo. Lolu chungechunge lwamabhali lusetshenziswa kakhulu ezigayweni zensimbi, embonini yokugaywa kabusha, kanye nasembonini yensimbi engayoni neyodwayo.
1. Wonke ama-hydraulic drive, angakhetha ukusebenza ngesandla noma ukusebenza kokulawula okuzenzakalelayo kwe-PLC;
2. Indlela yokulethwa kwephakeji ihlanganisa ukuphendulela iphakheji, ukusunduza iphakheji ohlangothini, ukusunduza iphakheji ngaphambili, ukuthatha iphakheji ngesandla, njll;
3. Izinhlobonhlobo zamamodeli ongakhetha kuzo: ukucindezela okuhlukile, usayizi webhokisi, usayizi wephakheji;
4. Lapho ugesi ungekho khona, ingasebenza ngenjini ye-diesel.
Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Y81 Hydraulic Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Scrap Metal Compactor,